Miaraka amin'ny ResearchKit Apple dia miditra tanteraka amin'ny fikarohana ara-pitsaboana | Vaovao IPhone
Iray amin'ireo fiasa natokan'ny Apple fotoana bebe kokoa omaly, na dia mety iray amin'ireo tsy dia liana amin'ny besinimaro aza izy io izay maniry ny hahita ny Apple Watch sy ny vidiny. Saingy tsy azontsika atao tsy jerena ny maha-zava-dehibe an'io dingana nalain'i Apple io, satria ResearchKit dia sehatra tonga lafatra ho an'ireo mpamorona hamorona fampiharana mamela ny mitarika fandalinana ara-pitsaboana tena ilaina sy angona momba ny marary, ho an'ny fanazaran-tena isan'andro momba ny fitsaboana ara-pitsaboana sy hanatontosa fanadihadiana izay manatsara ny aretina sy ny fitsaboana aretina toy ny asma, Parkinson, na diabeta. Ary ny ampahany tsara indrindra dia ity dia fanombohana fotsiny.
ResearchKit no dingana manaraka amin'ny zavatra natombok'i Apple tamin'ny taon-dasa tamin'ny app Health. Eny, Salud, ilay rindranasa izay napetraka tsy misy fampiasa amin'ny fitaovantsika ary tsy dia narahintsika loatra. Miaraka amin'ny fampandrosoana ilaina sy ny fanohanan'ny toeram-pitsaboana mitarika, zavatra izay tsy misy olona tsara noho Apple afaka mahatratra mora foana, ny app Health sy Researchkit dia afaka manamarika mialoha sy aorian'ny fikarohana ara-pitsaboana, satria mamaha ny sasany amin'ireo olana lehibe amin'ity sehatra ity izy ireo:
Ny haben'ny santionany: iray amin'ireo lafiny lehibe indrindra rehefa mamolavola fandinihana, satria miankina betsaka amin'ny hoe misy ifandraisany na tsia ny valiny azo.
Tahirin-kevitra kendrena: ny angona azo amin'ny alàlan'ny fandrefesana mivantana ataon'ny fitaovantsika: ny tahan'ny fo, ny dingana, ny fampihetseham-batana, ny fahamendrehan'ny hetsika, sns.
Fifandraisana roa: ny fifandraisana eo amin'ny mpikaroka sy ny lohahevitry ny fandinihana dia amin'ny lafiny roa.
Firy ny mpampiasa iOS eto amin'izao tontolo izao? Izay mpikaroka rehetra dia hanome zavatra hananana sehatra an-tapitrisany amin'ireo mpampiasa hanatanterahana ny fianarany. Mamela izany ny ResearchKit, satria io no fototra ahafahana mampivoatra fampiharana manokana isaky ny fanadihadiana. Ary tamin'ny hetsika Apple dia efa nasehon'izy ireo anay ny sasany amin'ireo rindranasa ireo:
Asthma, fampiharana iray izay mikendry ny hanangona vaovao amin'ireo toerana ireo, izay marary marary asma izay mandray anjara amin'ny fanadihadiana dia miharatsy ny soritr'aretin'izy ireo, noho izany dia afaka mahita trangam-pandraisana izy ary noho izany mametraka fepetra fisorohana izay ahafahan'izy ireo mifehy tsara kokoa ny aretina.
mPower, natokana ho an'ireo mararin'i Parkinson, izay tsy maintsy hanao hetsika maromaro (lalao fahatsiarovana, fahaiza-manao, fandehanana ary firesahana) hanaraha-maso ny aretin'izy ireo izay hanome tahirin-kevitra sarobidy ho an'ny mpikaroka amin'ny ambaratonga hatreto izay tsy azo.
GlucoSuccess, ho an'ireo marary diabeta. Izy io dia manara-maso ny fampihetseham-batana, ny sakafonao ary ny fanafody raisinao mba hahitana ny fiantraikan'ny fanaonao isan'andro isan'andro amin'ny haavon'ny glucose ao aminao. Ny marary dia ho afaka hahalala hoe inona ny toe-javatra nahatonga ny fiovan'ny haavon'ny siramamy ao amin'ny rà ary noho izany dia voafehiny tsara kokoa, ary ny mpikaroka dia mahazo ny angon-drakitra rehetra ahafahana manatsara ny fitsaboana.
Mizarà ny dia, ho an'ireo marary mahazo fitsaboana ara-simika noho ny homamiadan'ny nono. Izy io dia mikendry ny hanangona vaovao momba ny vokatra maharitra amin'ity fitsaboana ity, toy ny haavon'ny angovo, ny fahaizany misaina ary ny toetrany, ny vaovao izay ezahany hatsaraina ny kalitaon'ny fiainan'ireo marary ireo
Ny fanisana MyHeart dia te-hanombatombana ny fomba fiasan'ny fomba fiaina samihafa amin'ny risika aretim-po. Ny marary mandray anjara dia tsy maintsy mameno ny fanadihadiana isan-karazany ary manao asa izay hanome vaovao ho an'ny mpikaroka izay ny tanjony dia ny hanatsara ny fahazaran-tsain'ny mponina.
Ireo rindranasa ireo dia manangona vaovao mivantana ary miditra amin'ny angon-drakitra avy amin'ny fampiharana Fahasalamana. Azo antoka ny filaminana, ary mitahiry manokana ny angon-drakitra nefa tsy idiran'ny mpamorona fampiharana na Apple. Ny marary tsirairay dia hahafantatra amin'ny fandalinana tsirairay ny data azo. ary tsy maintsy omenao lalana izany fidirana izany.
ResearchKit koa dia loharano misokatra, izay tsy ampoizina amin'ny maha Apple azy mpanentana azy, ary tsy ho hita izy raha tsy amin'ny volana manaraka, amin'izay fotoana izay afaka manomboka miasa miaraka aminy ireo mpandraharaha. Eny, azonao atao ny misintona ireo rindranasa izay nampiasain'i Apple omaly hanehoana azy ary niresaka momba an'ity lahatsoratra ity izahay. Mazava ho azy fa afaka tanteraka izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Miaraka amin'ny ResearchKit Apple dia miditra amin'ny fikarohana ara-pitsaboana tanteraka
Ny vidin'i Apple dia manodinkodina ny tahan'ny fifanakalozana dolara euro Izahay eropeana dia mandoa bebe kokoa!